5 TRUCOS PARA GUARDAR TUS GAFAS DE SOL – THE INDIAN FACE
ယနေ့ခေတ်ဈေးကွက်အတွင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့လက်လှမ်းမီနိုင်သော အရည်အသွေးရှိမျက်မှန်များ၏ တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများကြောင့်၊ ၎င်းတို့ကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပေါင်းစပ်ရွေးချယ်နိုင်စေရန် မော်ဒယ်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်လိုသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မတူညီတဲ့ ခံစားချက်တွေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတွင်သာ၊ The Indian Face၊ တစ်ခုချင်းစီ၏ အမျိုးမျိုးသောအရောင်များဖြင့် မြှောက်လိုက်သောအခါတွင်၊ အရည်အသွေးကောင်းပြီး သင့်တင့်မျှတသောစျေးနှုန်းဖြင့် သင်ပိုင်ဆိုင်လိုသော စုစုပေါင်းရွေးချယ်စရာများစွာကို ဖန်တီးပေးသည့် ကွဲပြားသောမျက်မှန် 19 မော်ဒယ်အထိ သင့်အား ပေးထားပါသည်။ မျက်နှာကို အလှဆင်ပေးသည့် ပစ္စည်းများပါရှိသကဲ့သို့ သင့်မျက်လုံးကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မှန်ဘီလူးများတွင် တပ်ဆင်ပါ။ မျက်မှန်ဘီလူး The Indian Faceသူတို့က TAC တွေပါ။ polarမြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ၊ အရည်အသွေး3အကာအကွယ်နှင့် လျှပ်စီးကြောင်းများ UV400 နှင့် အမြင့်ဆုံးအလင်းပေးစွမ်းနိုင်သော polycarbonate ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘောင်။ အများသူငှာ ပေးကမ်းခြင်း မပြုနိုင်သော တန်ဖိုးကို ပေးဆောင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွဲပြားခြားနားသော မော်ဒယ်လ်ပုံစံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိရှေ့မှောက်တွင် ပြသထားသည့် မတူညီသောရွေးချယ်မှုများအားလုံးကို၊ alpine, Hookipa, အသက်ဝိညာဉ်, Ushuaia, ချိုင့်ဝှမ်း, Free Spirit, တောင်တန်း, Kahoa, Polar, ကြောကျဆောငျစညျး, အလကား, ရုတျတရကျဖွစျပှါးခွငျး, Oxygen ထုတ်ဝေ, Ventura, တောင်ကယ်လိုရီ, နော့, Kailani, Nunkui o Tarifaသင့်မျက်မှန်အတွက် ကောင်းမွန်သော သိုလှောင်မှုစနစ်တစ်ခု ရရှိရန်မှာ ၎င်းတို့သည် ပျက်စီးယိုယွင်းမှု မရှိစေရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံးစွမ်းရည်များကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် သင်၏နေ့စဉ်ဘဝတွင် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများအတွက် ၎င်းတို့ကို ကြည့်ရှုနိုင်စေမည့်အပြင် ၎င်းတို့ကို သင့်နေ့စဉ်ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် မြင်တွေ့နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
အိမ်အတွက်ရော လမ်းပေါ်ထွက်ဖို့ရော သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် လွယ်ကူသောရွေးချယ်မှုအချို့ကို သင့်အား တင်ပြပေးပါမည်။ ခက်ခဲမှုနည်းမှ ပိုကြီးတဲ့အတိုင်းအတာအထိ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စိတ်ကူးများစွာကို အောက်မှာ ပြောပြပါမယ်။ အိမ်လုပ် နေကာမျက်မှန် စီစဉ်သူများ။
ဤလှည့်ကွက်များအားလုံးအတွက်၊ လက်မှုပညာအတွက်အသုံးပြုသော ဆီလီကွန်ပူသေနတ်ငယ်သည် သင့်အတွက် ကြီးမားသောမဟာမိတ်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သင်တွေ့ရပါမည်။ သင့်တွင်မရှိပါက၊ သင်သည် အရည်ဆီလီကွန် သို့မဟုတ် အမေရိကန်ရက်ချိန်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
1. HANGER - မျက်မှန် HANGER
သစ်သားကြိုး သို့မဟုတ် ကြိုက်ရာ။
အလှဆင်ထည် သို့မဟုတ် ညှပ်တိပ်။
သင့်တွင် အလှပဆုံး သစ်သားကြိုးချိတ်တစ်ခု သို့မဟုတ် သင့်တွင်ရှိလျှင် အထည်အလိပ်များ သို့မဟုတ် သင်နှစ်သက်သည့် အခြားကြိုးကွင်းအမျိုးအစားကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုအလှဆင်ရန်၊ ကြိုးကွင်းပုံစံတြိဂံ၏နိမ့်သောနေရာ၊ မမြင်ချင်သည့်အပိုင်းတွင် ညှပ်တီးဝိုင်း သို့မဟုတ် တိပ်အစွန်းကို ပူသောဆီလီကွန်အနည်းငယ်ဖြင့် ကပ်ထားပြီး ဘားပတ်ပတ်လည်တွင် တိပ်ကိုပတ်ပါ။ အဲဒီကြားထဲမှာ နေရာလွတ်မထားခဲ့ပါနဲ့။ မျက်မှန် သို့မဟုတ် ကြိုးကွင်းတစ်ခုလုံးကို ချိတ်ထားမည့် အောက်ခြေအပိုင်းကိုသာ အလှဆင်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အစပိုင်းကို သင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ တူညီတဲ့အပိုင်းမှာ အဆုံးကို ဆီလီကွန်နဲ့ ပြင်ပါ၊ အခုအတွင်းပိုင်းဖြစ်လာမယ့်။ ဤနည်းဖြင့် အဆုံးအဖြတ်ကို မမြင်ရကြောင်း သေချာစေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် သင်သည် သင်၏မျက်မှန်အားလုံးကို ဗိမာန်တော်မှ ချိတ်ဆွဲထားနိုင်ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးကို အလွယ်တကူမြင်နိုင်စေပြီး မျက်ကပ်မှန်များကို ခြစ်ရာမရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်စေရန်အတွက် တစ်ဖက်စွန်းတွင် အဝတ်အစားများဖြင့် ဗီရိုထဲတွင် ချိတ်ဆွဲထားနိုင်သလို နံရံပေါ်တွင်လည်း ပန်းချီဆွဲထားနိုင်ပါသည်။
2. စုစည်းမှု အံဆွဲ - SEPARATOR
စိတ်ကူးမှာ သင်စုစည်းလိုသော မျက်မှန်နှင့် သင့်အံဆွဲအရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ သင့်အံဆွဲများထဲမှ တစ်ဝက်ကို လွတ်သွားစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေကာမျက်မှန်စီစဉ်သူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလိုသည့်နေရာကို တိုင်းတာမည်ဖြစ်ပြီး ကတ်ထူပြားကို အတိုင်းအတာအဖြစ် အခြေခံအဖြစ် ချိန်ညှိမည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ကတ်ထူပြား၏ အစွန်းများကို တစ်ဖန် တိုင်းတာပြီး ကွန်တိုကို တိုင်းတာရန် လိုအပ်သော4ဖက်ကို ဖြတ်ပြီး ပူသော သို့မဟုတ် အရည်ကို ဆီလီကွန်ဖြင့် ကပ်ထားသောကြောင့် ပူပြင်းသော ခြောက်သွေ့မှု ပိုမြန်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ခြောက်သွားသည်အထိ စက္ကန့်အနည်းငယ် ညှစ်ထားပါ။
ပိုင်းခြားမှုများပြုလုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗဟိုပိုင်းကို အလျားအလျားအတိုင်း ဖြတ်ပြီး ၎င်းကို ပေါင်းစည်းမည်ဖြစ်သည်။ မည်မျှ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်ကို အာရုံစိုက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ထားလိုသည့် တူညီသောမျက်မှန်ဖြင့် တိုင်းတာရန် လိုအပ်သော်လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် မျက်မှန်နှင့်မျက်မှန်ကြား 6-7 စင်တီမီတာသည် လုံလောက်ပါသည်။ ရေမြှုပ်ဘုတ်တွင် ပိုင်းခြားထားသော အပိုင်းများကို ဖြတ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ထပ်မံကော်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အံဆွဲ၏ခြေရင်းတွင် ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကို ထားရှိကာ ဤနည်းဖြင့် မျက်မှန်များကို ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
3. FRAME - ဇယား
ဘောင်မပါသော ပန်းချီကား၊ အများအားဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသော ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် သင်အသုံးမပြုတော့သော ပန်းချီပုံဘောင်ကို မြင်နိုင်သော ကင်းဗတ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
Satin ribbon ကို ကြိုက်တဲ့အရောင်။
ပြွန်တိပ် သို့မဟုတ် ပူသော ဆီလီကွန်။
ဘောင် သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံ၏နောက်တွင် ကပ်ထားသော တိပ်ခွေများ၊ ပြွန်တိပ် သို့မဟုတ် ပူစီလီကွန်ဖြင့် အပြားကျန်နေသည့် တိပ်ခွေများကို ဖြတ်တောက်ပြီး ဗိမာန်တော်မှ ချိတ်ဆွဲထားသည့်အခါတွင် မျက်မှန်သည် မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကို တိုင်းတာရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည် ။ အောက်မှာ နောက်ထပ် တိပ်ခွေကို ထားနိုင်ပါစေ။ ပြီးသွားရင်တော့ နံရံမှာ ကောင်းကောင်းဆွဲထားနိုင်ပေမယ့် ဘောင်မပါဘဲ ကင်းဗတ်တစ်ထည်ဆိုရင်တော့ အံဆွဲသေတ္တာပေါ်မှာ ထားလို့ရပါတယ်။
4. မျက်မှန် မျက်နှာပြင်
သင်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ထားသောကွန်တိန်နာများနှင့်မျက်မှန်များနှင့်ကိုက်ညီသောကွန်တိန်နာများ၊ သို့သော်သင်၏မျက်မှန်အတွင်းထည့်ရန်ပုံမှန်အားဖြင့်ကောင်းသောအရွယ်အစားရှိသောကြောင့်၎င်းတို့သည်သင်၏မျက်မှန်ကိုအထဲမှာထည့်ရန်ကောင်းသောအရွယ်အစားရှိသောကြောင့်၊ ထောပတ်ကဲ့သို့သောစျေးဆိုင်များမှစျေးသက်သာစွာရနိုင်သည်။
ဖယောင်းတိုင် ကိုင်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သော ဖန်သားပြင်အတွက် မတ်တပ်ရပ်လိုသည့် အခြေတည်သည်။
ဒီတစ်ခါတော့ နည်းနည်းပိုပြီး တီထွင်ဖန်တီးပြီး သင့်အခန်းမှာ မြင်ချင်တဲ့အရာတွေကို ရွေးချယ်ခြင်းအကြောင်းပါ။
ပထမဦးစွာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွန်တိန်နာများကို မျဉ်းတစ်ကြောင်းနှင့် ဘေးဘက်တွင် ချထားခြင်းဖြင့် နှစ်ထပ်အကန့်ကို ဖွဲ့ပါမည်။ ၎င်းတို့ကို မှောက်လျက်ချထားပါက ၎င်းတို့အားလုံး နောက်ကျောမှ ထိခြင်းရှိ၊ မရှိ သိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပူပြင်းသော ဆီလီကွန်ဖြင့် ၎င်းတို့ပါဝင်နိုင်ရန် အမှတ်များ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအကွာအဝေးကို ပေါင်းကူးရန် အချင်းချင်း မထိပါက၊ ထိတွေ့ရန် နည်းပါးသော အကွာအဝေးကို ချိတ်ဆက်ရန် အစွန်းတစ်ခုစီတွင် ဆီလီကွန်ပမာဏကို ဦးစွာထား၍ မာကျောခြောက်သွေ့စေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့ကို ပေါင်းထည့်ရန် အပေါ်မှ နောက်ထပ် ထပ်တူညီသော ပမာဏကို ပေါင်းထည့်ပါမည်။ ၎င်းတို့အားလုံးကို ရောစပ်ပြီး ဆီလီကွန်ခြောက်သွားသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် contour ကို အလှဆင်ထားသော ကန့်လန့်ကာဖြင့် အလှဆင်လိုပါက ယခုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
နောက်ပိုင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်ထားသော ပံ့ပိုးမှုတွင် ဆီလီကွန်ဖြင့် ၎င်းကို ပိတ်ဆို့ခြင်းတစ်ခုအဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။ ခြောက်သွေ့ပြီးတာနဲ့ အလှဆင်ပြီး စားပွဲပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါ။
5. သင့်မျက်မှန်များကို ပို့ဆောင်ရန်အတွက် EVA ရော်ဘာကာဗာ
ထူထဲသောချည် သို့မဟုတ် သိုးမွှေး။
အီဗာရာဘာဖြင့် အလှဆင်လိုသော ရင်ထိုး သို့မဟုတ် အပြားပုံစံ။
အလျား 40 စင်တီမီတာ x 12 စင်တီမီတာ ကျယ်သော အီဗာရာဘာပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သင့်နေကာမျက်မှန်တိုင်းနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပါမည်။ The Indian Face.
တြိဂံပုံသဏ္ဌာန်ရှိသော ပလတ်စတစ်များသည် eva ရော်ဘာပြားထက် အနံနှစ်စင်တီမီတာ ပိုနည်းပြီး အကျယ်မှာ တစ်စင်တီမီတာခွဲရှိသင့်သည်။ (၎င်းတို့ကို သင့်တွင်ရှိသော tupper အဖုံးဟောင်းမှ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၁၀ စင်တီမီတာ x ၁.၅ စင်တီမီတာ သို့မဟုတ် ၁၂ စင်တီမီတာ x ၁.၅ စင်တီမီတာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကို ဆွဲပြီး ဖြတ်လိုက်ပါ။ ပလတ်စတစ်သည် အလွန်ပါးလွှာပါက၊ ၎င်းတို့ကို နှစ်ဆဖြတ်ပြီး အဖုံးကိုဖွင့်ရန် ဖိသောအခါတွင် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ၎င်းတို့ကို ပူသောဆီလီကွန်ဖြင့် ကပ်ထားနိုင်သည်။
ကျဉ်းသောဧရိယာ၏အစွန်းနှစ်ဘက်တွင် ပလပ်စတစ်အကန့်ကို ကပ်ထားပြီး eva ရာဘာအစွန်းမှ နေရာလွတ်2မီလီမီတာချန်ကာ ပလပ်စတစ်ကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ရန် အတွင်းပိုင်းကို ခေါက်ပြီး ကော်ပါမည်။
သေနတ်ဖြင့် ရှည်လျားသော အစွန်းများပေါ်တွင် ဆီလီကွန်ထည့်ထားပြီး ၎င်းတို့သည် ကပ်နေစေရန် တစ်ဝက်တိတိခေါက်ပါမည်။
ထို့နောက် အဖုံး၏ အပြင်ဘက်အပိုင်းကို သတ္တုချောင်း သို့မဟုတ် ခလုတ်ဖြင့် အလှဆင်ထားပြီး ယခင်က ဖယောင်းတိုင်မီးကို အပူပေးသော်လည်း မီးမလောင်ဘဲ မည်းမသွားဘဲ အလှဆင်ပါမည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းကို eva ရာဘာအဖုံးပေါ်တွင် တံဆိပ်တုံးထုပြီး ဘေးချင်းကပ် ပန်းချီကားများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ကာ လိုချင်သလောက် လိုင်းများထည့်ပါမည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သိုးမွှေးထိုးအပ်နဲ့ သင်အနှစ်သက်ဆုံး ရောင်စုံသိုးမွှေး ဒါမှမဟုတ် အထူချည်ကြိုးတွေနဲ့ ပိုအလှဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပလတ်စတစ်ဧရိယာအောက်မှာ အပ်ချုပ်လိုက်ပါ။ ပလပ်စတစ်အပိုင်းအစများမရောက်ခင်အထိ အဖုံးပတ်ပတ်လည်အစွန်းမှ ပထမချုပ်ရိုး၏အစွန်းမှ ၃ မီလီမီတာအကွာတွင် ဝှက်ထားပါ။
ပြီးသွားသည်နှင့် သင်သည် အိတ်ကိုဖွင့်၍ လိုချင်သောမျက်မှန်များကို အိတ်ထဲတွင် ထည့်ထားနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံ နေရာယူထားသော အမာခံအိတ်ကို ယူဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
ယခု သင့်တွင် သင့်စိတ်ကြိုက် နေကာမျက်မှန်များကို တာရှည်ခံစေမည့် သေချာသည့် ဖျော်ဖြေမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော လက်မှုပညာများ စီးရီးတစ်ခုလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ၎င်းတို့ကို သင့်လက်ထဲတွင် အပြည့်အ၀ရှိနေစေမည်ဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပြီးကြောင်း ပြသနိုင်ရန် ၎င်းတို့ကို စမ်းသုံးကြည့်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
သင့်မျက်မှန်များကို ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေတွင်ထားရန် သင့်တွင် ဖြစ်နိုင်ပါက မျက်မှန်များကို သန့်စင်ရန် အရည်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ပါက သင့်တွင် cologne ပါသော မျက်ကပ်မှန်များ ရှိရပါမည်။ လက်ကိုင်ပဝါနှင့် လက်သုတ်ပဝါများတွင် အချိန်ကြာကြာအသုံးပြုပါက ကုတ်ခြစ်နိုင်သော ဖန်မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာ အမှုန်အမွှားများ ပါရှိသောကြောင့် မျက်မှန်အတွက် မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာအဝတ်ဖြင့် ကော်လိုဂျင်သည် ၎င်းတို့အား ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းမရှိဘဲ သန့်ရှင်းစေပါသည်။ အရမ်းညစ်ပတ်တဲ့အခါ ရေနဲ့ဆပ်ပြာအပျော့စားနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆေးပါ။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါသည် ထိုအခြေအနေတွင် ကောင်းမွန်သော အခြောက်ခံနည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ကို သင်အသုံးမပြုသည့်အခါ၊ ကျောက်တုံးများကို ခြစ်ရာမခြစ်မိစေရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို မတော်တဆထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန် စည်းရုံးရေးမှူး သို့မဟုတ် အိတ်ထဲတွင် ထားရှိသင့်သည်။
လည်ပင်းကြိုးကို ဘယ်တော့မှ မဝတ်ပါနဲ့၊ အဲဒီကနေ ပြုတ်ကျပြီး ကွဲနိုင်တာကြောင့်၊ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ သလင်းကျောက်တွေက အလွယ်တကူ ကွဲအက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ပတ်ပြီး သင့်ဆံပင်ကို ဖမ်းမိသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို သင့်ခေါင်းပေါ်တွင် မဝတ်ပါနှင့်။
မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သော အစားအသောက်များ စားသုံးရန် အရေးကြီးပါသည်။ မြေထဲပင်လယ်အစားအစာသည် ဤမှန်ကန်သောအစားအစာကို အလွန်နှစ်သက်သောကြောင့်၊ သံလွင်ဆီ၊ နေကြာစေ့နှင့် ပဲပိစပ်၊ ငရုတ်ပွနီ၊ လိမ္မော်သီး၊ ဥ၊ ဘရိုကိုလီ၊ မုန်လာဥနီ၊ အခွံမာသီးများ၊ အပြာရောင်ငါးနှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော အစားအစာများကို သတိပြုပါ။ ဤအစားအစာအားလုံးသည် ဗီတာမင် A, C, D ကြွယ်ဝပြီး ဆီးချိုရောဂါနှင့် အတူ အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည့် အသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်သော မက်ကူလာယိုယွင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ယေဘူယျကျန်းမာရေးကောင်းနေဖို့ကလည်း အလွန်အရေးကြီးပါတယ်၊ အဝလွန်ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း သို့မဟုတ် ကိုလက်စထရောများခြင်းကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော ပုံမှန်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းများသည် ၎င်းတို့ကို ဘေးကင်းစေရန် ကူညီပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ပေးထားသည့် အတိုင်း အရည်အသွေးမြင့် နေကာမျက်မှန် ဝတ်ဆင်ပါ။ The Indian Face အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘယ်အမူအရာတွေက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကို ပျက်စီးစေနိုင်သလဲ။
- သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက် အထူးသဖြင့် မနက်စာ မစားဘဲ ရှောင်ပါ။
- ၎င်းတို့သည် ကယ်လိုရီချည်းသက်သက် ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် အစာများကြားတွင် အဆာပြေစားပါ။
- သန့်စင်ထားသော သကြား သို့မဟုတ် ပြည့်ဝဆီများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပါ။
- လုံလောက်စွာ အနားယူခြင်းသည် မျက်စိညောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
- သွေးလည်ပတ်မှုနှေးကွေးတဲ့အတွက် အရက်သောက်ပါ။
- အစာကို ကောင်းစွာ ကျေညက်အောင် မစားနိုင်သောကြောင့် အမြန်စားပါ။
ကျွန်ုပ်၏ နေကာမျက်မှန်များကို မည်သို့ စီမံရမည်နည်း။
သင့်နေကာမျက်မှန်များကို စနစ်တကျထားရှိရန်၊ သင့်မျက်မှန်ကို ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို မျက်မြင်မပြတ်စေရန် ကြိုးကွင်းပေါ်တွင် ချိတ်ထားရန်ကဲ့သို့သော ရိုးရှင်းသော အကြံဉာဏ်များရှိပါသည်။
အံဆွဲတစ်ခုအား ရှင်းထုတ်ပြီး ၎င်းတို့ကို စုစည်းရန် နေရာတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သင့်မော်ဒယ်အားလုံးကို မြင်ကွင်းတွင်ထားရှိခြင်းသည်လည်း ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။